Apple iOS 14: Nzuzo data na IDFA Armageddon | Martech Zone
Na WWDC afọ a, Apple kwupụtara mbibi nke njirimara nke ndị ọrụ iOS maka ndị mgbasa ozi (IDFA) na mwepụta nke iOS 14. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ mgbanwe kachasị na gburugburu ebe obibi nke mgbasa ozi mkpanaka na afọ 10 gara aga. Maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi, mwepụ IDFA ga-akwado ma nwee ike mechie ụlọ ọrụ, na -emepụta ndị ọzọ ohere dị egwu.
Nyere ịdị ukwuu nke mgbanwe a, echere m na ọ ga-enye aka ịmepụta gburugburu ma kesaa echiche nke ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ mara mma nke ụlọ ọrụ anyị.
Gịnị na-agbanwe na iOS 14?
N'ịga n'ihu na iOS 14, ndị ọrụ ga-ajụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka esoro ha site na ngwa ahụ. Nke ahụ bụ nnukwu mgbanwe ga-emetụta mpaghara niile nke ngwa ngwa. Site na ikwe ka ndị ọrụ jụ nsuso, ọ ga-ebelata ọnụọgụ data nke anakọtara, na-echekwa nzuzo onye ọrụ.
Apple kwukwara na ọ ga-achọkwa ndị mmepe ngwa iji kọọ akụkọ gbasara ụdị ikike nke ngwa ha rịọrọ. Nke a ga - eme ka nghọta doo anya. Ikwe ka onye ọrụ mara ụdị data ha nwere ike ịnye iji jiri ngwa ahụ. Ọ ga-akọwakwa otu esi enweta data ahụ anakọtara na mpụga ngwa ahụ.
Nke a bụ ihe ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ ndị ọzọ kwuru maka ya
Anyị ka na-anwa ịghọta ihe mgbanwe ndị a [Mmelite nzuzo 14 iOS] ga-adị ka otu ha ga-esi emetụta anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana opekata mpe, ọ ga-eme ka o sikwuoro ndị mmepe ngwa na ndị ọzọ ike Na-eto eto site na iji mgbasa ozi na Facebook na ebe ndị ọzọ… Echiche anyị bụ na Facebook na mgbasa ozi ezubere iche bụ usoro ndụ maka obere azụmaahịa, ọkachasị n'oge COVID, anyị na-echekwa na atumatu ikpo okwu na-eme ihe ike ga-egbutu na usoro ndụ ahụ n'oge ọ dị otu a dị mkpa maka obere azụmaahịa na mgbake.
David Wehner, CFO Facebook
Anyị anaghị eche na mkpisi aka ga-agafe ule Apple. Site n'ụzọ, iji dokwuo anya, oge ọ bụla m na-ekwu ihe banyere usoro nke na-agaghị ele anya, ọ pụtaghị na usoro ahụ anaghị amasị m. Achọrọ m ka ọ rụọ ọrụ, mana echeghị m na ọ ga-agafe ule Apple sniff… Apple kwuru, sị, 'Ọ bụrụ na ị mee ụdị nsuso na mkpịsị aka ọ bụla bụ akụkụ ya, ị ga-eji mmapụta anyị up
Gadi Eliashiv, onye isi oche, Singular
Ọtụtụ oriri na ọ eụ theụ na usoro mgbasa ozi ga-achọ ụzọ ọhụrụ iji nye uru. Bụrụ ya njiri mara, mbughari, mmemme mgbasa ozi, ngwa ọrụ dabere na ROAS - ihe a niile ga-abụ ihe edoghị anya ma ị ga-ahụrịrị mbọ nke ụfọdụ ndị na-enye ha iji chọta okwu ọhụụ ọhụụ ma nwalee mmasị n'akụkụ ndị mgbasa ozi maka ụzọ ọhụụ dị egwu na-azụ ahịa dị ka a ga-asị na ọ nweghị ihe mere.
Onwe m, m na-atụ anya na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ nkwụsị na ụtụ isi dị elu maka egwuregwu egwuregwu-egwuregwu nkịtị, mana anaghị m ahụ ọnwụ ha. Ha ga-enwe ike ịzụta ihe dị ọnụ ala karịa na ebe ọ bụ na mgbado anya ha bụ ịzụrụ ezubere iche, ha ga-agbanwe ọnụ ahịa ha na ego ha tụrụ anya ha. Ka CPM na-ada, egwuregwu olu a nwere ike ịrụ ọrụ, ọ bụ ezie na obere ụtụ isi dị elu. Ọ bụrụ na ụtụ a ga - enweta ga - ezuru buru ibu. Maka isi, etiti etiti, na egwuregwu cha cha, anyị nwere ike ịhụ oge siri ike: Enweghị mweghachi azụ nke azụ whale, ọ nweghịzị ịzụ ahịa mgbasa ozi ROAS. Mana ka anyi chee ya ihu: uzo anyi si azuta ahia bu ihe omuma. O bu ihe nwute, ugbua ihe egwu a gha abawanye karie ma anyi gha enwe obere akara iji meghachi ngwa ngwa. Fọdụ ga-ewere ihe egwu ahụ, ndị ọzọ ga-akpachara anya. Na-ada ka lọtrị?
Oliver Kern, onye isi ndị isi na azụmaahịa na Nottingham nke dabeere na Lockwood Publishing
Anyị nwere ike nweta naanị 10% nke ndị mmadụ iji nye nkwenye, mana ọ bụrụ na anyị nweta 10% ziri ezi, ma eleghị anya anyị achọghị karịa. Echere m, site na ụbọchị 7 ị tụfuru 80-90% nke ndị ọrụ ọ bụla. Ihe ị kwesịrị ịmụta bụ ebe 10% na-abịa site coming ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta nkwenye n'aka ndị niile na-akwụ ụgwọ, mgbe ahụ ị ga-enwe ike maapụ ebe ha si wee bulite ebe ndị na-etinye.
Ndị nkwusa nwere ike ịga egwuregwu ndị na-adịghị mma ma ọ bụ wuo ngwa ngwa. Usoro a bụ inweta ngwa ngwa ntụgharị (ntụgharị iji wụnye), na-akwọ ndị ọrụ ebe ahụ ọnụ ala, wee ziga ndị ọrụ ahụ na ngwaahịa ndị ka mma. Ihe ga - ekwe omume bụ na ịnwere ike iji IDFV nwaa ndị ọrụ ahụ… Ọ bụ ezigbo usoro iji weghachite ndị ọrụ. Nwere ike iji DSP n’ime ụlọ mee nke ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na inwere ọtụtụ ngwa na otu ụdị, dị ka ngwa cha cha. N'ezie, ọ gaghị abụ ngwa egwuregwu: ngwa ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụhaala na ị nwere IDFV ziri ezi.
Nebo Radovic, Uto na-ebute, N3TWORK
Apple webatara usoro AppTrackingTransparency (ATT) nke na-ejikwa nweta IDFA na nnabata onye ọrụ achọrọ. Apple depụtara nkwupụta maka usoro a nke nwere ike inye ikike maka ịkọwapụta dịka ọ dị taa. Anyị kwenyere na ilekwasị anya na usoro a na ịmepụta ngwaọrụ n'ime iwu ndị a bụ ụzọ kachasị mma maka ịga n'ihu - mana tupu anyị abanye n'ime nke a, ka anyị lelee ihe ngwọta ọzọ. A na-ekwukarị ya n'otu ume ahụ, SKAdNetwork (SKA) bụ ụzọ dị iche iche dị iche iche na-ewepu data nke onye ọrụ kpamkpam. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ọ na-etinyekwa ibu nke njirimara na n'elu ikpo okwu n'onwe ya.
Gbanwee na ndị MMP ndị ọzọ na-arụ ọrụ ugbu a na ngwọta cryptographic site na iji omume dịka usoro ihe ọmụma efu nke nwere ike ikwe ka anyị kwuo na-enweghị ịfefe IDFA na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ ihe ịma aka ma ọ bụrụ na anyị ga-eji na-ngwaọrụ maka isi iyi na lekwasịrị anya ngwa, ọ dị mfe iche n'echiche a ngwọta ma ọ bụrụ na anyị na-ekwe na-enweta IDFA si isi iyi ngwa na naanị nwere ịrụ kenha na-ngwaọrụ na lekwasịrị anya… Anyị kwenyere na ịnweta nkwenye na isi mmalite ngwa yana on-ngwaọrụ Attribution na iche na ngwa nwere ike ịbụ ihe ndị kasị viable ụzọ maka onye ọrụ-larịị njirimara na iOS14. ”
Paul H. Müller, Co-guzobere & CTO Gbanwee
My Takeaways na IDFA Gbanwee
Anyị na-ekerịta ụkpụrụ Apple ma a bịa n'ichebe nzuzo onye ọrụ. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị ga-anabata iwu ọhụrụ nke iOS14. Anyị kwesịrị ịmepụta ọdịnihu na-adigide maka ndị mmepe ngwa na ndị mgbasa ozi. Biko lelee akụkụ nke m IDFA Amagedọn gbara gburugburu. Ma, ọ bụrụ na m ga-eche maka ọdịnihu:
Mgbu IDFA dị mkpirikpi
Ndị nkwusa kwesịrị ịgwa Apple okwu ma chọọ nkọwa na usoro na nkwenye ndị ọrụ njedebe yana iji IDFVs & SKAdNetwork ụzọ okporo ụzọ ngwaahịa, wdg.
Ndị nkwusa ga-eji ike na-ebuli usoro ndebanye aha na usoro ndị ọzọ. Nke a bụ iji bulie nkwenye na nzuzo ma ọ bụ nọrọ naanị na ọkwa ọkwa naanị maka mgbasa ozi ma tufuo onye ọrụ njedebe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu na-ebuli elu karịa ROAS, anyị na-agba ha ume ka ha chee banyere nkwenye nzuzo dị ka nzọụkwụ na ntugharị UA dị mkpa iji gosipụta mgbasa ozi ezubere iche maka ndị ahịa.
Ndị ụlọ ọrụ ga-eji nnwale na-arụ ọrụ na izipu ozi ndị ọrụ.
Ha ga enweta uzo ihe nlere na ntanetị maka ndebanye iji chekwaa IDFA. Mgbe ahụ, ire ere n'ime AppStore maka ịkwụ ụgwọ.
Anyị kwenyere na usoro 1 nke iOS 14 nwere ike ịdị ka nke a:
N’ọnwa mbụ nke izipu ozi iOS, usoro ọkọnọ maka mgbasa ozi arụmọrụ ga-enweta nkenke oge dị mkpirikpi. Karịsịa maka ịkọwapụta DSP.
Aro: Ndị na-akpọsa ngwa ekwentị nwere ike irite uru site na ịkwadebe n'oge maka mbupute iOS 14. Ha na-eme nke a site n’ibu ụzọ na-ebufe ihe okike nke ndị na - ege ntị na - eme omenala (bido na 9/10 - 9/14). Nke a ga - enye otu ọnwa ma ọ bụ abụọ nke iku ume ebe enwere ike ikpebi mmetụta ego.
Nzọụkwụ 1st: Ndị na-akpọsa ngwa ngwa ekwenti na-etinye ego na njikarịcha mgbasa ozi nke mgbasa ozi ha dị ka ndị na-ebu ha ụzọ iji kwalite arụmọrụ.
Nzọụkwụ 2nd: Ndị nkwusa ga-amalite ịkwalite nkwenye ndị ọrụ
Nzọụkwụ nke atọ: Ndi otu UA na genlọ ọrụ ga-amanye iwughachi usoro mkpọsa.
Nzọụkwụ nke anọ: Onye ọrụ ịpụ na nkekọrịta na-abawanye mana eme atụmatụ na naanị ruru max nke 20%.
Nzọụkwụ nke anọ: Ndị ọrụ mkpịsị aka na-agbasa ngwa ngwa iji nwaa idobe ọnọdụ ahụ.
Cheta na: Ndị mgbasa ozi na-ebughi oke ibu nke na-eme ka ebumnuche sara mbara nwere ike ibido dị ka ndị na-achụ nta whale dị elu na-adọghachi azụ na-akpata nwa oge CPM deflation. Anyị na-atụ anya na ọnụ ahịa dị elu nke onye debanyere aha na niche ma ọ bụ egwuregwu siri ike ga-emetụta. N'ihu ibu ihe nnwale okike ugbu a gaa na ụlọ akụ.
Oge Etiti IDFA Mmetụta
Mkpisi aka ga-abụ azịza nke ọnwa 18-24 wee banye n'ime igbe oji algorithm / njikarịcha ojii nke onye ọ bụla. Ka SKAdNetwork na-eto, Apple nwere ike imechi akara mkpịsị aka ma ọ bụ jụ ngwa ndị mebiri iwu App Store.
A ga - enwe nsogbu ga - akwagide maka mmemme / mgbanwe / azịza DSP.
Ojiji nke nbanye Facebook nwere ike ịbawanye dị ka ụzọ isi mee ka njirimara nke ndị ahịa bara uru dị elu. Nke a bụ iji chekwaa ego eji eme ihe na njikwa AEO / VO. Ihe ntinye nke mbu nke Facebook kwalitere na adreesị ozi-e nke onye ọrụ na nọmba ekwentị, na-enye ha ohere maka ịmegharị na nlọghachi.
Otu ndị na-eto eto na-achọta okpukpe ọhụrụ nwere "usoro mgbasa ozi na-agwakọta agwakọta." Ha na-amuta ihe site na ndi ahia ahia. N'otu oge ahụ, ha na-achọ ịgbasa akara ngosi ikpeazụ iji mepee ụzọ ọhụrụ okporo ụzọ. Ihe ịga nke ọma ga-adabere na nnwale miri emi na nhazi nke sayensị data na otu ndị na-eto eto. Ndị ụlọ ọrụ ndị ahụ nke buru ụzọ nweta ụlọ ọrụ ga-enwe uru dị egwu iji wee nweta ma kwado ogo
SKAdNetwork ga-enwewanye nkwalite na ọkwa Mgbasa Ozi / AdSet / Ad iji mee ka netwọk mgbasa ozi na-arụ ọrụ.
Ngwa ngwanrọ nke na-etinye ego na mgbasa ozi na-adọrọ adọrọ. O yikarịrị ka ego a ga-enweta na mbenata ya ga-ebelata mana ọ ga-adịkarị mma karịa ọnwa 3-6 na-esote.
Ogologo oge IDFA Mmetụta
Njikwa nkwenye onye ọrụ na-aghọ isi ikike.
Google deprecates GAID (google ad id) - Oge ọkọchị nke 2021.
Ebumnuche nke mmadụ, echiche okike, na njikarịcha bụ isi ihe nchịkwa maka nnweta uru nke onye ọrụ gafee netwọkụ.
Increba ụba na ezigbo ọwa kachasị dị egwu dị oke egwu.
Anyị niile nọ n'ụgbọ mmiri a ma anyị na-atụ anya iso Apple, Facebook, Google na MMP na-arụ ọrụ ịkekọrịta ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ngwa mkpanaka anyị.
Lelee anya maka mmelite ndị ọzọ site na Apple, site na ụlọ ọrụ, na site na anyị gbasara mgbanwe IDFA.
Tags: apple ad idụlọ ahịacpmahịa nnwetadata nzuzoOkechukwu nwachukwuFacebookmkpisiakaGadi eliashivgaidgoogle ad ididfaIDFViosiOS 14ad mgbasa ozi mkpanakamobile ngwa ọdịnalangwaọrụ mkpanaaka idnjirimara ekwentịenweghị radovicOliver kernnzuzoSKAd Netwọk
MoEngage: Nyochaa, Nkeji, Mee, ma hazie njem nke Ndị Azụmaahịa-Mbụ